Lyris agbachitere akpaghị aka ọdịnaya ọdịnaya | Martech Zone
Fraịde, Machị 27, 2015 Fraịde, Machị 27, 2015 Douglas Karr
Lyris weputara Lyris Predictive nkeonwe, a ọdịnaya ọdịnaya maka nkwusa ikpokọta igwe mmụta na dijitalụ ozi dijitalụ iji nyefee ọdịnaya ahaziri nke ọma na onye ọ bụla debanyere aha.
Site na ijikọta ọdịnaya na omume igwe mmadụ na omume omume na-ege ntị, Nkọwapụta Nkọwapụta nke Lyris na-abawanye ntughari na ego mgbasa ozi site na inye ndị nkwusa ikike ịbawanye njikọ aka. Ndị ahịa na-ahụrịrị mmụba 2x na 3x na-emeghe ma pịa-site na ọnụego, 25% na 50% mbelata nke ndị na-edebanye aha, na ịchekwa oge na okike na nhazi.
Inye ọdịnaya dị oke mkpa n'ogo dijitalụ dijitalụ chọrọ akpaaka ọgụgụ isi. Ezubere atụmatụ nkeonwe nke Lyris iji rite uru nke ihe niile onye nkwusa mara banyere ndị na-ege ya ntị, bulie ya na mmekọrịta oge ma na-akpaghị aka na-ezukọ ma napụta ozi ndị kwesịrị ekwesị nye ndị debanyere aha gafee ọwa dijitalụ kachasị amasị ha. Nke a bụ isi maka ịkwọ ụgbọ ala na itinyekwu ego. Sylvia Sierra, SVP ahịa nnweta na njigide na Nweta ọgụgụ isi
Site na itinye aka na nzukọ na nnyefe nke ozi ahaziri iche iche nke gụnyere ụdị ọ bụla na ọnụọgụ nke ihe edepụtara, Lyris Predictive Personalization na-eme ka mkpọsa mkpọsa na-ebelata ma na-ebelata okike ozi na oge mkpuchi. Nke a na - eweta mmekọrịta ndị gbakwunyere uru nke na - eme ka mgbasa ozi mgbasa ozi na ntụgharị na-ebelata nnabata ndị na - atụ ụtụ.
O yiri ka ọ na-emegide nkọwa nke okwu ahụ, na n'eziokwu, ọ dịghị onye ga-ede otu nde ozi ịntanetị pụrụ iche, ọ bụghị n'oge ndụ a. Nkọwapụta nke onwe nke Lyris na-eme ka izipu otu nde ozi ịntanetị iche iche dị mfe dị ka izipu otu. Lyris na-ahapụzi ndị nkwusa izipu ozi nkeonwe dabere na data oge mgbe onye ọrụ ọ bụla nwere ike itinye aka na ya. Akin Arikan, onye isi oche ahịa azụmaahịa na Lyris
Banyere Lyris, Inc.
Lyris Predictive Personalization bụ akụkụ nke Lyris 'Izi ozi Izi ozi nke ndị na-ege ntị. Lyris bu onye ndu email na azịza ahia dijitalụ nke na-enyere ulo oru aka iru ndi mmadu onu ahia ma mekwaa uru nke onwe ha na aka obula. Ngwaahịa na ọrụ Lyris na-enye ndị nkwusa ikike imepụta, rụọ ọrụ, ma bulie ahụmịhe ndị na-akwado njikọ aka dị elu, mụbaa ntụgharị, ma nyefee uru azụmaahịa nwere atụ.
Tags: ike ọdịnayaokpokoroLyris Izi Ozi Izi oziọdịnaya ọdịnayaịkọwapụta amụma
ClearSlide: Ngosipụta Ngosi maka Nkwado Ahịa